Who is the president of Zimbabwe 2009? - Evi
You asked: Who is the president of Zimbabwe 2009?
Robert Gabriel Mugabe KCB (born on February 21, 1924), the President of Zimbabwe
Vote or Vote Who is the president of Zimbabwe 2009?
How do we know? What or who is the president (head of a nation state) of Zimbabwe, (officially the Republic of Zimbabwe and formerly Southern Rhodesia, the Republic of Rhodesia, and Zimbabwe Rhodesia), the landlocked country located in the southern part of the continent of Africa, between the Zambezi and Limpopo rivers in 2009 (MMIX), the common year starting on Thursday (dominical letter D) in the Gregorian calendar?
December 31st 1987 onwards
Robert Mugabe has been the president of Zimbabwe since at least December 31st 1987
who is the president of zimbabwe 2009
president of zimbabwe 2009
who's the president of zimbabwe in 2009